နွေ ဦး ရာသီအချိန် - အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုရှင်းလင်းပါ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 16, 2012 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 11, 2012 Lavon ဘုရားကျောင်း
ဒါဟာနောက်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်ပါ။ နေ့ရက်များရှည်ပြီးရာသီဥတုသာယာသည်။ လူတို့သည်များသောအားဖြင့်နွေရာသီအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူတို့၏အိမ်များကိုအပေါ်မှအောက်သို့သုတ်နိုင်သည်။ ငါသည်ငါ့နှိမ့်ချနေအိမ်၏နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပြီငါသိ၏။ သင်၏သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုအားသင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိုဂရမ်သို့ဘာသာပြန်ရန်မှာမကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ ဒီနေရာမှာနွေ ဦး သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်အချို့ရှိပါတယ်။
ပွတ်တိုက်! သင်၏စာရင်းများကိုကောင်းစွာကောင်းစွာစစ်ဆေးရန်အချိန်ယူပါ။ သင်၏စာပို့ခြင်းကိုမည်သူနှင့်မျှမတွေ့ပါ။ သူတို့ကိုပယ်ဖျက်ရန်အကြံပေးလိုမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ပြန်လည်ပါ ၀ င်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်သူတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းကိုလန်းဆန်းစေပြီး၎င်းတို့ကိုလက်ခံရရှိလိုသူများအတွက်သင်၏အီးမေးလ်များကိုသာသာပို့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသေချာစေသည်။
လတ်ဆတ်သောဘဝ။ ပန်းပွင့်တွေတပွင့်ပွင့်လန်းလာတဲ့နွေ ဦး ရာသီမှာငါအမြဲတမ်းချစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေမှာအလားတူပြောနိုင်သလား။ မရရှိလျှင်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်အချိန်ယူပါ။ သူတို့ဟာလှပရင်တောင်သင်တစ်နှစ်တည်းဒီဇိုင်းကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် - အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ လက်ရာကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာများလက်ခံရရှိသူများသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသောအခါသင်၏အီးမေးလ်များသည်အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။
ပိုလနျ။ နွေ ဦး သန့်ရှင်းရေးသည်သင်၏မက်ထရစ်ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းဒါကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာသေချာပါတယ် အမှန် သူတို့ကိုကြည့်ပါ။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများသည်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုလက်ခံကြသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဆန်းစစ်ပါ။ သင်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုတူလားသို့မဟုတ်ပိုကောင်းလားဆိုတာကိုသိရန်သင်ဤကိုအာရုံစိုက်ပြီးအီးမေးလ်အနည်းငယ်ထပ်မံဖန်တီးပါ။
အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ ငါနွေ ဦး သန့်ရှင်းရေးအချိန်ကိုငါ့အိမ်၌နေရာတစ်ခုပြန်လည်စီစဉ်ရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်ကိုသိရန်အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ကြိုးစားရန်အချိန်တန်ပြီလား။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က Merkle ၏“ View From the Digital Inbox” ၏အဆိုအရ“ အင်တာနက်ဖွင့်နိုင်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုကြသည်။ ” သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများနှင့်အလှမ်းဝေးနေပြီဖြစ်လိမ့်မည်။ အဲဒီမှာမနေနဲ့ သင်၏ပရိသတ်သည်စာဖတ်ခြင်းသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်စာပေးမည်ဆိုပါကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ရာသီသစ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုအနည်းငယ်မျှသာပြုလုပ်ရန်အတွက်!
ထိုအီးမေးလ်များကိုနွေ ဦး ပေါက်သန့်ရှင်းရေးအကူအညီလိုအပ်ပါသလား။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုင်ပင်ခံကိုဆက်သွယ်ပါ Delivra။ နွေ ဦး သန့်ရှင်းရေးလက်ကိုငှားရမ်းရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ဧပြီ 16, 2012 မှာ 4: 43 pm တွင်
ယခုအချိန်သည်သင်၏အီးမေးလ်စာရင်းအားရှင်းလင်းရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီးအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများက၎င်းတို့သည်“ စိတ်မ ၀ င်စားသော” မက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အရာများကိုဖယ်ရှားပေးရန်အကြောင်းပြချက်ပိုများသည်။ သင်၏အီးမေးလိပ်စာဟောင်းများနှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားသူများကိုမရှင်းလင်းခြင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်နည်းဗျူဟာကိုများစွာကူညီလိမ့်မည်။ မူဝါဒအသစ်များအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်ဤဆောင်းပါးကို http://spotright.com/digital-marketing/spotiq-segment-now/ တွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။